Umhla My Pet » umphezulu 5 US Cities for Men Single
Kukho ezinye izixeko US apho abantu abangatshatanga baziva bekhululekile ngaphezu kwabanye. Le ngxoxo malunga amagama amahlanu phezu uluhlu izixeko ezifana. Ngoko ke, ukuba indoda enye kwaye bejonge ukuba bafudukele, le bhala-up ngokuqinisekileyo uya kuba ukufunda luncedo kuwe; kwaye ukuba sele komnye waloo mizi, ucinga lucky.
1. City New York: Lo mzi akukho ndawo nje lizwe inkulu ombaxa, kodwa kwakhona enye yeendawo ezininzi oluthile ehlabathini. Umzi tops olu luhlu ngeyona US imizi amadoda olunye ikakhulu ngenxa umlinganiselo amadoda angatshatanga kunye nabasetyhini kuyo. kuba wonke 100 amadoda angatshatanga, Umzi lowo 125 abafazi abangatshatanga; ukuze, abantu abangatshatanga City New York kusoloko ezininzi iinketho ezikhoyo ukuba ukhethe xa kuziwa kumaqabane ukuchola.
Badla ngokuba “umzi ukuba kungaze ulele”, izindlu City New York iinketho ezininzi ukukhetha ukusuka naxa kufikwa kwiindawo ukuthandana ukuze. Unako lounge in Central Park okanye zingakhetha ukuchitha ngorhatya njengento kwiklabhu posh (Umzi lowo abaliqela kubo).
2. Bismarck: amadoda omnye ekhangele ukuba sihlale phantsi unokucinga efudukela Bismarck, isixeko ikomkhulu imeko North Dakota. Nangona angafuneki nganto njengangoku ngumba omkhulu Melika kunye zokuzimela ngeenxa lulonke izinga layo ngqesho 5.6 %, izinga lentswela kulo mzi kuphela 2.8%.
Ukwengeza, kuba ejinga kwaye bachitha ixesha kunye nabasetyhini, Umzi lowo eziliqela amabala ashushu, ezibandakanya bharini, iiklabhu ubusuku zokutyela. Bismarck uvumela ukuthandana emanzini; uyakwazi ukuthatha iqabane lakho ukuthandana intw kwi-McDowell Dam Nature Park isikhephe.
Amadoda abathanda uku, kwelinye icala, bangathatha inxaxheba ezityhutyhayo uku ecaleni elunxwemeni Missouri River.
3. Washington D.C.: Ukuba indoda enye yebhongo, ikomkhulu US le ndawo ukuba lilungu. Esi sixeko nezindlu inani ezinika zembali yenkcubeko kwaye yindawo apho abasetyhini enye ngaphezu kwamadoda angatshatanga.
Xa Washington D.C., uya kufumana ezifana iinketho kwanaxa ukhangela itshatshazi umhla. Ungakwazi ukuba iqabane lakho intw phezu noTidali Basin isikhephe, mabavule la National Zoo, okanye achithe ngorhatya ayizukuba kwi-jazz nightclub yimbali iBohemian ezimfanteni. Ezi nje ukhetho ambalwa kufuneka; uya bafumane ngaphezulu xa wena esixekweni.
4. Philadelphia: Isibheno yimbali kwalo mzi kwenza oko bafaka yesine kolu luhlu. Amadoda kakuhle olunye elinye abafazi ratio yenye into onoxanduva lokwenza Philadelphia omnye phezulu 5 imizi amadoda angatshatanga.
Ukuthandana ePhiladelphia yinto enkulu kungekhona nje ngenxa iindawo ezifana iFairmount Park, Philadelphia Museum lwezobuGcisa, Ortlieb ngayo Jazzhaus njalo, imozulu lomzi likwanoxanduva ngokwenza oyiparadesi dater ngayo. Yonke imihla iintsuku ezishushu basePhiladelphia.
5. Miami: I Nightlife okuqholiweyo yenza ukuba isixeko esikhulu zokuhlala abantu abangatshatanga. Iindleko ophantsi zokuphila kunye nobukho abafazi abangatshatanga ngaphezu kwamadoda ezinye izinto ezimbini ezinkulu ezithe Miami le bafaka lokugqibela kolu luhlu.
Nganye kwezi zixeko ezihlanu uya kuvumela abantu abangatshatanga ukuba abe nobomi kwenzeka. Ngoko ke, nto kwaphela phezulu kuwe yeyiphi ukhetha ukuba bafudukele.